နပွေညျတျောမှာ ဆေးလိပျသောကျခှငျ့ တားမွဈ‌တော့မညျ – Voice of Myanmar
နပွေညျတျောမှာ ဆေးလိပျသောကျခှငျ့ တားမွဈ‌တော့မညျ
နပွေညျတျော၊ ဒီဇငျဘာ ၂၇-၂၀၁၉
နပွေညျတျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီသညျ နပွေညျတျောစညျပငျသာယာရေးဥပဒပေုဒျမ ၈ ပုဒျမခှဲ(တ) ၊ ရောဂါကွိုတငျကာကှယျရေးနှငျ့ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးမြားဆောငျ
ရှကျခွငျးလုပျငနျးတာဝနျအရ နပွေညျတျောစညျပငျသာယာရေးနယျနိမိတျအတှငျး နထေိုငျကွသော
ပွညျသူမြားအား ဆေးလိပျနှငျ့ဆေးရှကျကွီးထှကျပစ်စညျးသောကျသုံးမှုကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာမညျ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမြားမှ ကာကှယျရနျအတှကျ ဆေးလိပျနှငျ့ဆေးရှကျကွီးထှကျပစ်စညျး သောကျသုံးမှုထိနျးခြုပျရေးဆိုငျရာ စညျးကမျးမြားအား အမြားပွညျသူတို့ သိရှိလိုကျနာစရေနျ ပုဒျမ ၃၈ ပုဒျမခှဲ(ခ)အရ ဤအမိနျ့ကွျောငွာကို ထုတျပွနျကွညောလိုကျသညျ။
၁။ နပွေညျတျောစညျပငျသာယာရေးနယျနိမိတျအတှငျးရှိ အောကျပါပရိဝုဏျ၊ အဆောကျအအုံ နှငျ့နရောမြားသညျ ဆေးလိပျသောကျခှငျ့မရှိသော နရောမြားဖွဈသညျ
(က) ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးမြား၏ ပရိုဏျအတှငျးရှိ ဝနျထမျးအိမျရာနှငျ့ အိမျခနျးမြားမှအပ ဆေးရုံအဆောကျအအုံ၊ ရုံးခနျး ပရိဝုဏျနှငျ့ ပရိဝုဏျအတှငျးရှိ အခွားအဆောကျ အအုံမြား၊
(ခ ) လအေေးပေးစကျတပျဆငျထားသောစားသောကျဆိုငျမြား၊ လှကျရညျဆိုငျမြားနှငျ့ အအေးဆိုငျမြား
( ဂ ) လအေေးပေးစကျတပျဆငျထားသော စတိုးဆိုငျမြား၊ ကုနျတိုကျမြား၊ ကုနျပဒသောဆိုငျမြားနှငျ့ကိုယျပိုငျဈေးမြား၊
(ဃ) ကုနျတိုကျ၊ ကုနျပဒသောဆိုငျ၊ စတိုးဆိုငျနှငျ့ အမိုးအကာရှိသညျ့ ဈေးမြားအတှငျးရှိ ဈေးရုံမြား၊ .
( င ) အမိုးအကာရှိသညျ့စားသောကျဆိုငျမြား၊ လှကျရညျဆိုငျမြားနှငျ့အအေးဆိုငျမြား၊
( စ ) ကလေးကစားရုံနှငျ့ ကစားကှငျးမြား
( ဇ ) ပုဂ်ဂလိကကြောငျးပရိဝုဏျအတှငျးရှိဝနျထမျးအိမျရာနှငျ့အိမျခနျးမြားမှအပသငျကွားရေး အဆောကျအအုံ၊ စာသငျခနျး၊ ရုံးခနျးပရိဝုဏျနှငျ့ပရိဝုဏျအတှငျးရှိအခွားအဆောကျအအုံမြား၊
( ၅ ) ဘာသာရပျသငျကိုယျပိုငျသငျတနျးနှငျ့ သငျတနျးကြောငျးမြား၏ သငျကွားရေးအဆောကျအအုံနှငျ့ စာသငျခနျးမြား
(ည) ဧညျ့ဂဟော၊ တညျးခိုရိပျသာနှငျ့ ဘျောဒါဆောငျတို့၏ အဆောကျအအုံမြား၊
၂။ အထကျအပိုဒျ(၁)ပါနရောမြား၏ တာဝနျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ
(က) မိမိနှငျ့သကျဆိုငျသောနရောရှိ လူအမြားမွငျသာသညျ့နရော၌ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနမှ အမိနျ့ကွျောငွာစာတှငျဖျောပွထားသော သတျမှတျခကျြ
မြားနှငျ့အညီ ဆေးလိပျသောကျခှငျ့မရှိသောနရောကို ဖျောညှနျးသညျ့ စာတနျးနှငျ့အမှတျအသားမြားကို ပွုလုပျထားရှိရမညျ။
( ခ ) အထကျအပိုဒျ၁ပါ အပိုဒျခှဲ(င)နှငျ့အပိုဒျခှဲ (ည)တို့၏ တာဝနျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ မိမိနှငျ့သကျဆိုငျသောနရောတှငျ ဆေးလိပျသောကျခှငျ့ရှိသောသီးသနျ့နရောကို ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနမှ အမိနျ့ကွျောငွာစာတှငျဖျောပွထားသော သတျမှတျ
ခကျြမြားနှငျ့အညီ စီမံထားရှိရမညျဖွဈပွီး ဆေးလိပျသောကျခှငျ့ရှိသောသီးသနျ့နရောကို ဖျောညှနျးသညျ့ စာတမျးအမှတျအသားနှငျ့ဆိုငျးဘုတျမြား ပွုလုပျထားရှိရမညျ။
(ဂ ) ဆေးလိပျသောကျခှငျ့ မရှိသောနရော၌ မညျသူမြှဆေးလိပျသောကျခွငျးမပွုရနျ ကွပျမတျဆောငျရှကျရမညျ။
၊ ဆေးလိပျနှငျ့ဆေးရှကျကွီးထှကျပစ်စညျး သောကျသုံးမှုထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျးအဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ ကွီးကွပျသူမြားက လာရောကျစဈဆေးသညျ့အခါ စဈဆေးခွငျးကိုခံယူရမညျ။
(က) ကြောငျးပရိဝုဏျမြားမှ ပေ ၁၀၀ အတှငျး ဆေးလိပျရောငျးခခြွငျးမပွုရ
( ခ ) စီးကရကျကိုလှယျကူစှာ ဝယျယူသောကျသုံးနိုငျစရေနျ တဈလိပျခငျြးဖွဈစေ၊ အလိပျ(၂၀)ထကျနညျးသော အထုပျဖွငျ့ဖွဈစေ ရောငျးခခြွငျးမပွုရ
( ဂ ) ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနမှထုတျပွနျထားသော“ဆေးလိပျထုပျတှငျ သတိပေးရုပျပုံနှငျ့စာသားမြား ပုံနှိပျဖျောပွခွငျးဆိုငျရာအမိနျ့”တှငျ သတျမှတျထား
သညျ့အတိုငျး သတိပေးရုပျပုံနှငျ့စာသားမြားပုံနှိပျဖျောပွထားခွငျးမရှိသော ဆေးလိပျထုပျမြားကိုခငျးကငျြးရောငျးခခြွငျး၊ ဖွနျ့ဖွူးခွငျးမပွုလုပျရ၊
(ဃ) အသကျ(၁၈)နှဈမပွညျ့သေးသောသူအား ဆေးလိပျကိုရောငျးခခြွငျး(သို့မဟုတျ)ပေးကမျးခွငျးမပွုရ။
( င ) အသကျ(၁၈)နှဈမပွညျ့သေးသောသူအားဆေးလိပျဖွနျ့ဖွူးခွငျး(သို့မဟုတျ)ရောငျးခြ ခွငျး
( စ ) ဆေးလိပျသောကျခွငျးကွောငျ့ ကနျြးမာရေးကို ဆိုးရှားရှာထိခိုကျစနေိုငျကွောငျး၊ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးသားထားသော သတိပေးစာတနျးကို ဆေးလိပျရောငျးခသြညျ့နရောတှငျ ထငျရှားမွငျသာစှာ ဖျောပွထားရှိရမညျ
(ဆ) အသကျ(၁၈)နှဈမပွညျ့သေးသောသူကို ဆေးလိပျရောငျးခခြွငျးမပွုကွောငျး၊မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးသားထားသော သတိပေးစာတနျးကို ဆေးလိပျရောငျးခြ
သညျ့နရောတှငျ ထငျရှားမွငျသာစှာ ဖျောပွထားရှိရမညျ။
၄။ ကျောမတီ၏ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ လုပျငနျးဆောငျရှကျသောတာဝနျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ ဆေးလိပျရောငျးခသြူ
မြားသညျ အထကျဖျောပွပါစညျးကမျးခကျြမြားအားလိုကျနာခွငျးမရှိပါက ကျောမတီသညျ နပွေညျတျော စညျပငျသာယာရေးဥပဒပေုဒျမ ၂၂အရ အောကျပါစီမံခနျ့ခှဲရေးနညျးလမျးဖွငျ့ အရေးယူနိုငျသညျ
( ခ ) ဒဏျကွေးငှအေနညျးဆုံး (၁၀၀၀ဝိ/) (ကပျြတဈသောငျးတိတိ) တပျရိုကျခွငျး၊
( ဂ ) လိုငျစငျ (သို့မဟုတျ) ခှငျ့ပွုခကျြကို ကာလအကနျ့အသတျဖွငျ့ ရပျဆိုငျးခွငျး၊
(ဃ) လိုငျစငျ (သို့မဟုတျ) ခှငျ့ပွုခကျြကို ပယျဖကျြခွငျး။
၅။ နပွေညျတျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီမှ အခါအားလြျောစှာထုတျပွနျသော ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးနှငျ့သကျဆိုငျသညျ့ ဆေးလိပျနှငျ့ဆေးရှကျကွီးထှကျပစ်စညျး သောကျသုံးမှုထိနျးခြုပျရေးဆိုငျရာ စညျးကမျးခကျြမြား၊ အမိနျ့နှငျ့အမိနျ့ကွျောငွာစာမြားအား လိုကျနာရမညျ။
၆။ အထကျဖျောပွပါစညျးကမျးခကျြမြားအား လိုကျနာမှုရှိပါက နပွေညျတျောစညျပငျသာယာရေး
ဥပဒအေရသျောလညျးကောငျး၊ တညျဆဲဥပဒတေဈရပျရပျအရသျောလညျးကောငျး ထိရောကျစှာအရေးယူခွငျးခံရမညျ။
၇။ ဤအမိနျ့ကွျောငွာစာထုတျပွနျသညျ့ရကျမှ ရကျပေါငျး(၁၈၀)အထိ ပညာပေးကာလအဖွဈ
သတျမှတျမညျဖွဈပွီး ၊ ရကျပေါငျး(၁၈၀)ကြျောလှနျသညျ့နမှေ့စ၍ ကြူးလှနျဖောကျဖကျြသညျ့ မညျသူ
#VOM #voiceofmyanmar #နပွေညျတျော #ဆေးလိပျ #တားမွဈ
နေပြည်တော်မှာ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့် တားမြစ်‌တော့မည်
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇-၂၀၁၉
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ(တ) ၊ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်
ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်အရ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း နေထိုင်ကြသော
ပြည်သူများအား ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းသောက်သုံးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများအား အများပြည်သူတို့ သိရှိလိုက်နာစေရန် ပုဒ်မ ၃၈ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ဤအမိန့်ကြော်ငြာကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
၁။ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အောက်ပါပရိဝုဏ်၊ အဆောက်အအုံ နှင့်နေရာများသည် ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်မရှိသော နေရာများဖြစ်သည်
(က) ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ၏ ပရိုဏ်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့် အိမ်ခန်းများမှအပ ဆေးရုံအဆောက်အအုံ၊ ရုံးခန်း ပရိဝုဏ်နှင့် ပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ အခြားအဆောက် အအုံများ၊
(ခ ) လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသောစားသောက်ဆိုင်များ၊ လွှက်ရည်ဆိုင်များနှင့် အအေးဆိုင်များ
( ဂ ) လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသော စတိုးဆိုင်များ၊ ကုန်တိုက်များ၊ ကုန်ပဒေသာဆိုင်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဈေးများ၊
(ဃ) ကုန်တိုက်၊ ကုန်ပဒေသာဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်နှင့် အမိုးအကာရှိသည့် ဈေးများအတွင်းရှိ ဈေးရုံများ၊ .
( င ) အမိုးအကာရှိသည့်စားသောက်ဆိုင်များ၊ လွှက်ရည်ဆိုင်များနှင့်အအေးဆိုင်များ၊
( စ ) ကလေးကစားရုံနှင့် ကစားကွင်းများ
( ဇ ) ပုဂ္ဂလိကကျောင်းပရိဝုဏ်အတွင်းရှိဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့်အိမ်ခန်းများမှအပသင်ကြားရေး အဆောက်အအုံ၊ စာသင်ခန်း၊ ရုံးခန်းပရိဝုဏ်နှင့်ပရိဝုဏ်အတွင်းရှိအခြားအဆောက်အအုံများ၊
( ၅ ) ဘာသာရပ်သင်ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းနှင့် သင်တန်းကျောင်းများ၏ သင်ကြားရေးအဆောက်အအုံနှင့် စာသင်ခန်းများ
(ည) ဧည့်ဂေဟာ၊ တည်းခိုရိပ်သာနှင့် ဘော်ဒါဆောင်တို့၏ အဆောက်အအုံများ၊
၂။ အထက်အပိုဒ်(၁)ပါနေရာများ၏ တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည်
(က) မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာရှိ လူအများမြင်သာသည့်နေရာ၌ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာတွင်ဖော်ပြထားသော သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အညီ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်မရှိသောနေရာကို ဖော်ညွှန်းသည့် စာတန်းနှင့်အမှတ်အသားများကို ပြုလုပ်ထားရှိရမည်။
( ခ ) အထက်အပိုဒ်၁ပါ အပိုဒ်ခွဲ(င)နှင့်အပိုဒ်ခွဲ (ည)တို့၏ တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ရှိသောသီးသန့်နေရာကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာတွင်ဖော်ပြထားသော သတ်မှတ်
ချက်များနှင့်အညီ စီမံထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ရှိသောသီးသန့်နေရာကို ဖော်ညွှန်းသည့် စာတမ်းအမှတ်အသားနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များ ပြုလုပ်ထားရှိရမည်။
(ဂ ) ဆေးလိပ်သောက်ခွင့် မရှိသောနေရာ၌ မည်သူမျှဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမပြုရန် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၊ ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကြီးကြပ်သူများက လာရောက်စစ်ဆေးသည့်အခါ စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူရမည်။
(က) ကျောင်းပရိဝုဏ်များမှ ပေ ၁၀၀ အတွင်း ဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်းမပြုရ
( ခ ) စီးကရက်ကိုလွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူသောက်သုံးနိုင်စေရန် တစ်လိပ်ချင်းဖြစ်စေ၊ အလိပ်(၂၀)ထက်နည်းသော အထုပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ရောင်းချခြင်းမပြုရ
( ဂ ) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသော“ဆေးလိပ်ထုပ်တွင် သတိပေးရုပ်ပုံနှင့်စာသားများ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်”တွင် သတ်မှတ်ထား
သည့်အတိုင်း သတိပေးရုပ်ပုံနှင့်စာသားများပုံနှိပ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော ဆေးလိပ်ထုပ်များကိုခင်းကျင်းရောင်းချခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းမပြုလုပ်ရ၊
(ဃ) အသက်(၁၈)နှစ်မပြည့်သေးသောသူအား ဆေးလိပ်ကိုရောင်းချခြင်း(သို့မဟုတ်)ပေးကမ်းခြင်းမပြုရ။
( င ) အသက်(၁၈)နှစ်မပြည့်သေးသောသူအားဆေးလိပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း(သို့မဟုတ်)ရောင်းချ ခြင်း
( စ ) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားရွာထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော သတိပေးစာတန်းကို ဆေးလိပ်ရောင်းချသည့်နေရာတွင် ထင်ရှားမြင်သာစွာ ဖော်ပြထားရှိရမည်
(ဆ) အသက်(၁၈)နှစ်မပြည့်သေးသောသူကို ဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်းမပြုကြောင်း၊မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော သတိပေးစာတန်းကို ဆေးလိပ်ရောင်းချ
သည့်နေရာတွင် ထင်ရှားမြင်သာစွာ ဖော်ပြထားရှိရမည်။
၄။ ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သောတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဆေးလိပ်ရောင်းချသူ
များသည် အထက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းချက်များအားလိုက်နာခြင်းမရှိပါက ကော်မတီသည် နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၂အရ အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းဖြင့် အရေးယူနိုင်သည်
( ခ ) ဒဏ်ကြေးငွေအနည်းဆုံး (၁၀၀၀ဝိ/) (ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ) တပ်ရိုက်ခြင်း၊
( ဂ ) လိုင်စင် (သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုချက်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊
(ဃ) လိုင်စင် (သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။
၅။ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ၊ အမိန့်နှင့်အမိန့်ကြော်ငြာစာများအား လိုက်နာရမည်။
၆။ အထက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာမှုရှိပါက နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး
ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရသော်လည်းကောင်း ထိရောက်စွာအရေးယူခြင်းခံရမည်။
၇။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်သည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၁၈၀)အထိ ပညာပေးကာလအဖြစ်
သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၊ ရက်ပေါင်း(၁၈၀)ကျော်လွန်သည့်နေ့မှစ၍ ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်သည့် မည်သူ
#VOM #voiceofmyanmar #နေပြည်တော် #ဆေးလိပ် #တားမြစ်